Saraakil ka tirsan AMISOM oo gaaray Garbahaarey – Radio Daljir
Juunyo 16, 2021 9:15 b 0
Saraakiil ka socota Ciidamada Booliska AMISOM ayaa waxaa ay gaareen degmada Garbahareey oo ah Xarunta Gobolka Gedo, iyada oo suweyn halkaasi loogu soo dhaweeyay.
Garoonka diyaaradaha degmada Garbahaareey ayaa waxaa wafdiga saraakiisha ah kusoo dhaweeyay Gudomiye kuxigeenka Gobolka Gedo,Taliyaha Booliska Gobolka iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Maamulka degmada Harbahaareey.
Ujeedada wafdiga ka socda Saraakiisha Booliska AMISOM ay ku tageen degmada Garbahaareey ayaa waxa lagu sheegay hubinta Amniga goobaha doorashada lagu qabanayo, iyada oo la filayo in dhawaan halkaasi la geeyyo Ciidamo ka socda Booliska AMISM.
Saraakiisha ka socota Booliska AMISOM ee gaaray degmada Garbahaareey ayaa ka kala socda wadamada Ugandha, Kenya, Seirra Leone iyo Nigeria, waxaana la filayaa inay kulamo la qaataan mamulka obolka Gedo & Saraakiisha Ciidamada.
Dowladdaha Soomaaliya & Qatar oo kawadda hadlay xirirka labada dal